Ny Twitter avy amin'ny antoko fahatelo dia hampiseho bitsika voatanisa marina | Vaovao IPhone
Iray herinandro lasa izay ny iray amin'ireo vaovao manandanja nampidirin'ny Twitter tao amin'ny tambajotran-tserasera ary tsy iza izany fa ny fomba vaovao manonona bitsika. Talohan'izay, rehefa mitanisa izay nosoratan'olon-kafa dia tsy afaka nanampy litera vitsivitsy fotsiny ho an'ny hafatr'izy ireo izahay, izay indraindray nahatonga anay hanitsy ilay hafatra tany am-boalohany. Ankehitriny, avy amin'ny fampiharana Twitter ofisialy, rehefa mitanisa bitsika dia ampiana ho pikantsary izay mijanona ho 22 litera fotsiny avy amin'ny 140 misy.
Ity, izay tsy nisy afa-tsy tamin'ny fisoratana anarana ofisialin'izy ireo, na dia marina aza fa efa afaka nampiasa ilay asa niaraka tamin'ny mpanjifa Twitter Tweetbot aho, ho hita manomboka anio amin'ny fangatahana antoko fahatelo. Hatao izany satria ny Twitter dia nanavao ny API hamelana ireo mpamorona hafa hanampy io fahafaha-manao zava-dehibe io amin'ny fampiharana azy.
Araka ny voalazan'ny Twitter, manomboka izao dia ho afaka hahita "bitsika" fitanisa bitsika isika, izay mahatonga ahy hisalasala ankehitriny raha toa ka hanomboka mitanisa bitsika amin'ny fomba hafa i Tweetbot afaka herinandro ho avy. Azo antoka fa amin'ny "marina" dia midika fa nanangana ny API izy ireo ary ofisialy fa azo ampiana ireo bitsika voalaza etsy ambony.
Ity vaovao ity, manan-danja ho an'ny mpampiasa mpanjifa Twitter an'ny antoko fahatelo, dia miaraka amin'ny zavatra tsy fantatra ihany koa. Ary izany ve Tweetium ho an'ny mpamorona Windows dia nilaza fa tsy mamela ny fampiharana azy ireo hanohanana ny fanovana Twitter API miaraka amin'ny fiasa vaovao, ka tsy mazava ny antony na ny fotoana hitrangan'izany.
Amin'ny maha-te hahafanta-javatra anao, maneho hevitra fa misy ireo mpampiasa milaza fa mampihomehy ny hoe «ny kinova ofisialin'ny Twitter ho an'ny iPad dia tsy mampiseho tsara ny fiasan'izy ireo hanonona sioka«. Toy ny mahazatra, "ao an-tranon'ny mpanefy ..."
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Ny fampiharana Twitter an'ny antoko fahatelo dia hampiseho bitsika voatonona 'marina' ihany koa.
Lancelot dia hoy izy:
Heverina fa 6 herinandro eny, saingy tsy afaka mitanisa amin'ny iOS amin'ity fomba vaovao ity aho (avy amin'ny fampiharana ofisialy ary miaraka amin'ny ios, miaraka amin'ny zava-drehetra nohavaozina tamin'ny kinova farany). Avy amin'ny tranokala twitter eny, fa tsy avy amin'ny rindrambaiko iphone. mivoaka hatrany amin'ny fomba mahazatra. Efa nanandrana ny zava-drehetra aho, hametraka indray ny app sns, saingy tsy misy, tsy misy fomba. Misy mahalala ny antony mahatonga izany?
Valiny tamin'i Lancelot
Manana olana mitovy amin'izany aho, tsy afaka mitanisa ireo bitsika amin'ny fomba vaovao, mariho fa efa nohavaozina tamin'ny kinova farany aho, nanandrana nametraka indray ilay rindranasa aho saingy mbola mitovy ihany, sendra olon-kafa izany? Misy vahaolana ve? Eny, manelingelina ny marina.